Booliiska Soomaaliya oo lagu taageeray gaadiid casri ah oo loogu talagay ka hortaga qaraxyadda: Sawiro | Hadalsame Media
Home Wararka Booliiska Soomaaliya oo lagu taageeray gaadiid casri ah oo loogu talagay ka...
Booliiska Soomaaliya oo lagu taageeray gaadiid casri ah oo loogu talagay ka hortaga qaraxyadda: Sawiro
(Moqadisho) 02, Juun, 2018 – Dowladda Talyaaniga ayaa ku wareejisay ciidamadda Booliiska Soomaaliya qalab casri kaas oo loogu tagalay in looga hortago qaraxyadda.
Taliyeha Booliska Soomaaliya Jen: Bashiir Cabdi Maxamed oo saxaafadda kula hadlay Moqdisho Sabtigii ayaa sheegay in wax badan iska bedeli doonaan habka looga hortago qaraxyadda iyo falalka kale ee amniga la xariira ee ka dhaca dalka gaar ahaan Caasimada Magaaladda Muqdisho.
Taliyaha ayaa kaga mahadceliyey Talyaaniga taageeradooda.
Qalabkaan casriga ah oo ka kooban Gaadiidka nuuca loo yaqaano BMW ayaa la filayaa in wax badan uu ka bedelo shaqada ciidanka Booliiska Soomaaliya oo aan heysan qalab ku filan oo ku hawlgalaan.
Talyaanigu waxaa uu ka mid ah dhawr dal oo taageero dhaqaale iyomid farsamo siiya dowladda Soomaaliya, waxaa sidoo kale uu ka mid yahay dalalka Midawga Yurub ugu fir-fircoon marka ay timaado taageerada ay siinayaan dowladda Federaalka ee Soomaaliya.
Previous articleSoomaaliya: Dagaallo culus oo ka dhacay Gobolada Bari iyo Hiiraan.
Next articleDAAWO: Nin middi maqar oo kale ah wata oo maanta sas ku ridey mujtamaca London + Sawirro